Mozika Jazz : Nodimandry tany La Réunion i Jeannot Rabeson -
AccueilVaovao SamihafaMozika Jazz : Nodimandry tany La Réunion i Jeannot Rabeson
11/09/2017 admintriatra Vaovao Samihafa 0
Andrarezin’ny mozika jazz. Nodimandry omaly tatsy amin’ny Nosy La Réunion i Jeannot Rabeson, izay fantatra amin’ny fahaizany mitendry piano. Rabeson Jean Bernard no tena anarany, ary nanomboka teo amin’ny faha-8 taonany izy no niditra teo amin’ny sehatry ny mozika raha nitendry tamin’ilay fandaharan’ny Radio Tananarive « Demi-heure des amateurs ». Nanomboka teo dia niara-nitendry tamin’ireo rahalahiny, Raymond sy Dédé izay tao anatin’ilay tarika « Les frères Rabeson ». Nanaraka ny dadatoany Louis Rasoanaivo, izay mpamorona fantatra tamin’ny fotoan’androny ihany koa izy.
Taorian’izay, maro ireo mpanakanto sy mpitendry kalaza no niantso azy raha tsy hitanisa afa-tsy ry Guy Laffite, Michel De Villers, Maxim Saury… toa izany koa ny filalaovana niaraka tamin’ny tarika samihafa nahitana an-dry Jacques Vidal, Richerd Raux, G. Brown… Tamin’izany fotoana dia efa maro ireo mpitendry nifanerasera sy nifandray taminy.
Anisan’ny varavarana nisokatra nandehanan’i Jeannot Rabeson tany ivelany ny nifandraisany tamin’ny Mpanjaka Marôka Hassan II, raha nitendry tamin’ny trano fisakafoanana « Le Madrigal » izy. Nanasa azy ho any Maraoka io Mpanjaka io, ary niala teto Madagasikara izy ny taona 1960. Tokony ho nijanona tany izy, araka ny fangatahan’ny mpanjaka ihany, nefa nisafidy ny niverina an-tanindrazana mba hijery ireo zanany, dia ilay mpively amponga maroanaka Tony Rabeson sy Josée Rabeson, mpihira.
Niaraka tamin’ireo rahalahiny, nandray anjara tamin’ilay hetsika « Festival d’Antibes » izy niaraka tamin’i Serge Rahoerason teo amin’ny amponga maroanaka raha vao 14 taona. Taorian’io dia maro ireo hetsika iraisam-pirenena nandraisan’izy ireo anjara. Anisan’ny nitendry sy niara-nihira tamin’ny zanany Ella Rabeson ihany koa izy.
81 taona i Jeannot Rabeson izao nindaosin’ny fahafatesana izao. Izahay eto amin’ny gazety Triatra dia mirary fiononana ho an’ny fianakaviana.
Olo-mangam-pirenena no efa zokiolona eo amin’ny fitantanana ny Firenena ny Filohan’ny Antenimieran-doholona, Rakotomanana Honoré. Nisy ny dinika nifanaovana taminy mikasika ny fahitany ny raharaham-pirenena amin’ity fiandohan’ny taona vaovao ity. Hono Tamin’ny fifampiarahabana nahatratrarana ny ...Tohiny